Ngathi-Iqela leShishini le-Hebei Sunrise
Yasekwa ngo-1969 libhunga lesitalato iSunrise, Umzi-mveliso weHebei SunriseIqela liqela lezoshishino elinembali ende. Kuphuhliso lweminyaka emininzi, iqela le-Sunrise libandakanya amashishini ali-16 anesikali kunye nenqanaba lobuchwephesha ngoku.
Iqela eliphuma ilanga ikakhulu lijolise kwinto enye kuphela: iimveliso zensimbi zensimbi, kubandakanywa nokushushu okuqengqelwe, ukubanda okuqengqelekayo kunye neentsimbi zokuzoba (isikweri, umjikelezo, uxande, i-oval, njl.njl.) Umbhobho kunye netyhubhu, izinto ezishushu ezijikelezayo , kunye nezinye izinto zokwakha), i-keel yensimbi ekhanyayo, eqengqelekayo kunye neplani yentsimbi yomatshini kunye nentsimbi yombhobho wesinyithi kunye nombhobho. I-PPGI kunye ne-PPGL nazo zinokubonelelwa.
Sikwindawo yedolophu yase-Shengfang, isiXeko saseBazhou, kwiPhondo le-Hebei, nje iziko lendawo enxantathu yeBeijing, iTianjin neBaoding, 35km empuma yeTianjin New Port, kunye ne-120km kumantla eBeijing , oololiwe kunye nenkonzo yokuhambisa. Siphinde simisele inkampani kwi-tianjin kunye hongkong.
Inkampani yethu igubungela ummandla oziimitha ezingama-66670. Inkampani yethu isetele ixesha elide izinto ezingasetyenziswanga (q215 q195 - q195L) nonxibelelwano ngeQian Steel, Hang iron, Tian iron, kunye neTun Steel ukuqinisekisa umgangatho wemveliso ozinzileyo. Sikwajongwa kwimigca yentsimbi ebandayo ebandayo, umtya wentsimbi emnyama, ityhubhu yentsimbi, itawuli yensimbi, umbhobho wesinyithi ongenazimbane kunye nombhobho wensimbi weHF-weld. Singabenza kwiinkcazo ezahlukeneyo ngokwemfuno zabathengi. Umthamo wethu wenyanga wokwenza iitoni ezingama-6000 ngoku.
Umxholo wophuhliso: ukuvelisa imveliso yenqanaba lokuqala, uphumelele ngomgangatho
Umbono wamathuba: ngexesha elifanelekileyo ulwazi lemakethi
Umxholo weTalente: abasebenzi, umthombo wobutyebi
Umgaqo obalulekileyo: landela eyona ilungileyo
Imveliso: ukhuseleko, ukusebenza ngempumelelo okukhulu, ekumgangatho ophezulu
Umxholo wentengiso: sisebenzisana ngokunyanisekileyo
Umxholo wenkonzo: khonza abathengi ngentliziyo iphela
Inkampani yethu inokuqinisekisa ukubakho kwemveliso kunye nomhla wokuhanjiswa. Sijonge ukuseta ubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi kwihlabathi liphela.